पृथ्वी जयन्ती सन्दर्भ : यसकारण पृथ्वीनारायण शाह महान होइनन् - Himalayan Kangaroo
पृथ्वी जयन्ती सन्दर्भ : यसकारण पृथ्वीनारायण शाह महान होइनन्
Posted by Himalayan Kangaroo | २७ पुष २०७२, सोमबार ०२:२५ |
पृथ्वीनारायण शाह आधुनिक नेपालका निर्माता मानिन्छन । मुलुकलाई गणतन्त्र घोषणा गरिसकेपछि सरकारले पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिन पौष २७ मा दिँदै आएको विदा कटौति गरेको छ। तर देशमा फेरि सल्बलाउन थालेको राजावादी र अति हिन्दूवादीहरु पृथ्वीनारायण शाहलाई नेपाल एकिकरणको एक्लो मसिहा भन्दै उनको जन्मदिन पौष २७ मा सार्वजनिक विदा दिनुपर्ने अभियानमा लागेका छन् । उनै पृथ्वीनारायणले इतिहासमा आफू महान कहलाउन थुप्रै इतिहासहरु लुकाएका रहस्योद्घाटन इतिहासविदहरुले गरेका छन् । प्रस्तुत छ पृथ्वीनारायणको लुकाइएको केहि इतिहास :
* पृथ्वीनारायण शाह राजा भइसकेपछि र प्रधानहरु कान्तिपुर नगई बाटैमा विदा हुन लागेका बेला उनले उनीहरुलाई त्यहीँ मारेर उनीहरुको सर्वस्व हरण गरेका थिए। अर्थात् पृथ्वीनारायण शाहको नियत भनेको आफू सत्तामा आइसकेपछि त्यहाँकाहरुलाई सफाया गर्ने थियो, चाहे ती उनलाई सहयोग गर्ने हुन् वा प्रतिरोध गर्ने।
* त्यतिबेला जंगबहादुरले लखनउ विद्रोह दबाएपछि जति लुटपाट गरेका थिए, त्योभन्दा चर्को रुपमा उपत्यकामा उनले लुटपाट मच्चाएका थिए। उनका सेनाले हस्तलिखित १ हजार अमूल्य ग्रन्थ पनि खात लगाई जलाइदिएका थिए।
* राज्यस्तरबाट पुरातात्विक सामान नष्ट गर्ने अभियान आधुनिक कालसम्म पनि जारी नै थियो। पुरातात्विक सामान, मूर्ति आदि चोरेर, चोर्न लगाएर विदेशमा निर्यात भइरह्यो। नत्रभने भक्तपुरको तलेजु मन्दिर भित्र रहेको मूलढोकाबाट भित्र नछिर्ने दुई वटा गजुर हराउने थिएनन्, २४ घण्टा सेनाको पहरा भएको ठाउँमा भएको सुन्धारामा रहेको मकर चोरेर लगिँदैन थियो। नत्र भने कसको तागत थियो क्रेन लिएर भूपतिन्द्र मल्लको शालिक चोर्न जाने ?
* राजाले भोजमा बोलाएर त्यहाँबाट फर्किएकाहरुलाई गल्लीगल्लीमा पहरा राखिएका सेनाले धमाधम काटेर नरसंहार गरेका थिए।
* त्यसैले फ्रेञ्च इतिहासकार सिल्भाँ लेभीले भनेका यी गोरखाली भनेका समयभन्दा अति क्रुर अथवा दानीका रुपमा अगाडि आउनसक्ने द्वैध चरित्रका शासकहरु हुन्।
यहाँ पुनः स्मरण गराउँ कि त्यतिबेला नेपाल (उपत्यका) ले तिब्बतका लागि मुद्रा छापेर त्यता पठाउने र त्यस वापत् नेपाललाई राजस्व आउने गर्थ्यो। तर पृथ्वीनारायण शाहले त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेनन्, साथसाथै व्यापारमा पनि धेरै कर बढाए। हिन्दुस्तान र तिब्बतबीच व्यापार गर्ने व्यापारीहरुलाई पनि देशनिकाला गरिदिए। अनि ठूल्ठूला व्यापारीहरु पनि व्यापार गर्नका लागि अरु देशमा गए। सन् १७७४ मा नेपालमा तिब्बतसित कारोबार गर्ने दुई वटा मात्र कश्मिरी पसल बाँकी रहेको थियो। पृथ्वीनारायण शाहको कानुन, नियम पालना नगर्ने व्यापारीहरुको कान काटेर देश निकाला गरिन्थ्यो।ता-सि-लुन-पोया तेसु लामा (दलाई लामापछिका दोस्रा लामा) ले नेपालका राजालाई पत्र समेत पठाएका थिए यसो भनेर-”हिन्दू होस् वा मुसलमान, सबै व्यापारी तपाईँदेखि डराउँछन्, कोही पनि तपाईँको देशमा बस्न राजी छैनन्।”
* इतिहासकार सूर्यविक्रम ज्ञवालीका अनुसार गोरखा एकदम सानो र आर्थिक रुपले एकदम कमजोर राज्य थियो। यस्तो ठाउँका राजाले एकीकरण अभियान सुरु गर्ने परिकल्पना गर्नु नै असंभव छ।
* पृथ्वीनारायण शाहले आफ्ना मामासित पनि यसबारेमा छलफल गर्दा उनले पनि नेपालमा हमला गर भनेर सल्लाह दिएका थिए, एकीकरण गर भनेर हैन।
* पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यका आक्रमण एकीकरणका लागि नभएर आर्थिक लाभका लागि गरेका थिए, टुक्राटुक्रा अवस्थामा रहेको ‘नेपाल’ लाई एउटै राज्य बनाउने उद्देश्यले हैन।
* पृथ्वीनारायण शाहले सिमाना विस्तार गर्नका लागि सैनिक गठन गरेका बेला सेनामा लिन सकिने, मिल्ने भएभरका मानिसहरु जम्मा गर्दा पनि १३०० भन्दा बढी संख्या पुर्‍याउन सकेका थिएनन्। यसले पनि गोरखाको हैसियत के थियो भनी देखाउँछ।
*त्यतिबेला इटालीका शासक मेजिनीले सन् १८७१ मा घोषणा गरेरै अरु राज्यसित मिलेर एकीकरणको पाइला अगाडि बढाएका थिए, तर यहाँ त्यसो भएको हैन। पृथ्वीनारायण शाहको उपदेश पुस्तकमा कतै पनि एकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छैन।
* इतिहास सँधै तरवारले लेखिन्छ। जित्नेको नाममा रामायण लेखिन्छ, हार्ने रावणलाई राक्षस घोषणा गरिन्छ। सीतालाई जंगलमा पठाउने राम नै मर्यादापुरुषोत्तम हुन्छन्। पृथ्वीनारायण शाहलाई त्यसैले वडा महाराजधिराज भनाइएको हो। यदि एकीकरण नै गर्ने भनी पाइला चालेका नै भए हारेको ठाउँका सेनालाई शत्रुका सैनिकलाई पनि नगरिने व्यवहार नगर्नु पर्ने हो।
एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा माअ‍ोवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभएको रहेछ, “पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेको भएर…, नत्र त्यतिबेला मल्ल शासनले आर्थिक समृध्दि हासिल गरेर अ‍ौद्योगिक चरणमा प्रवेश गरिसकेको हुन्थ्यो” तर प्रचण्डज्यु, नेपालको एकीकरण साँच्चिकै पृथ्वीनारायण शाहले गरेका हुन् त ? राज्यबाट प्रायोजित नेपाली इतिहासकारहरुले मात्र पृथ्वीनारायण शाहका ज्यादतिहरुलाई ‘एकीकरण’को नाम दिएका हुन्। तर माअ‍ोवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले समेत पृथ्वीनारायण शाहको ज्यादतिलाई एकीकरण भन्नु एकदमै सुहाउने कुरा हैन।
पृथ्वीनारायण शाहले दिव्योपदेशमा नेपाललाई चार वर्ण ३६ जातको साझा फूलबारी भनेका थिए। तर व्यवहारमा भने ठ्याक्कै त्यसको उल्टो भयो। राज्यले कहिले जनजातिको विकास र संरक्षण गर्‍यो ? एउटा उदाहरण काफी हुन्छ-रेडियो नेपालमा प्रसारण भइरहेको एउटै मात्र नेपालभाषाको कार्यक्रम जीवन दबू पञ्चायत कालमा २०२२ साल वैशाख २१ गते बिना कारण बन्द गर्न लगाइयो। त्यसको विरोधमा शान्तिपूर्ण साहित्य सम्मेलन, गोष्ठी गर्दा समेत प्रशासनले तीव्र दमन गर्‍यो।
आजभोलि जातीय स्वशासनका कुरा आउँदा गरिने विरोध यही पृथ्वीनारायण शाहको सामन्ती, दमनकारी नीतिको अवशेष मात्र हो।
Previousकाँग्रेसले पारित गरेको निर्वाचनसम्बन्धि कार्यदिशा यस्तो छ
Nextसरकार र मोर्चाको कार्यदल वैठक पुन: बस्दै
बिबिसीका पत्रकारहरुको वार्षिक तलब प्रतिवेदन सार्वजनिक (कसले कति कमाउँछन् ? )
वसन्तपुरमा घटेको एसिड आक्रमणको दुई वर्ष वित्यो,पीडित युवतीको पीडा भने आलै
२२ जेष्ठ २०७३, शनिबार १४:२६